Nakhu okuhlanu okugqamile embikweni wemfundo yamahhala | News24
Nakhu okuhlanu okugqamile embikweni wemfundo yamahhala
Johannesburg - NgoMsombuluko uMengameli Jacob Zuma ukhiphe umbiko obubhekwe ngabomvu wekhomishini kaHeher mayelana nemfundo yamahhala ezikhungweni ephakeme zemfundo kuleli.
Lo mbiko uveze ukuthi uyalihlonipha ilungelo labantu baseNingizimu Afrika lokuthola imfundo ephakeme kanjalo nomsebenzi woMbuso wokuqinisekisa ukuthi uyakufezekisa lokhu. Nokho uphinde wagqamisa nomnotho wezwe ontengayo, okusho ukuthi imfundo yamahhala ngeke ikwazi ukuba khona okwamanje.
Ikhomishini kaHeher yasungulwa ukuze yeluleke uMengameli Zuma ekutheni kuphenywe ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube nemfundo yamahhala kuleli, kulandela imibhikisho ezikhungweni zemfundo ephakeme kuleli ngo-2015 no-2016.
Nanka amaphuzu ayisihlanu agqamile kulezi zincomo zombiko:
Ayikho imali eyeneke kuhulumeni ukuba kuhlinzekwe abafundi ngemfundo yamahhala.
Abafunda kuma-TVET kumele bathole imfundo yamahhala, lapho kunesidingo khona kumele bathole uxhaso lokufunda.
U-R50bn kumele uthathwe kwi-Unemployment Insurance Fund (UIF) ukuze kuthuthukiswe ingqalasizinda kuma-TVET.
Abafundi abafunda ezikhungweni ezizimele nezingaphansi kukahulumeni kumele bahlinzekwe ngosizo ngokohlelo lukahulumeni lwe-Income-Contingency Loans abangaluthola emabhange.
Labo abanayo imali yokukhokha, mabakhokhe. Abafundi bazoqala ukukhokha imali abebefunda ngayo kuphela uma sebefinyelele ezingeni elithile lomholo.